XOG:- Goormee ayaa lasoo dhisi doonnaa golaha wasiirada ee maamulka Hirshabeele? – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Goormee ayaa lasoo dhisi doonnaa golaha wasiirada ee maamulka Hirshabeele?
Wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe ayaa sheegayaa in dhismaha golaha wasiirada ee maamulka Hirshabeele markii labaad dib loo dhigay, kadib markii madaxweynaha maamulkaasi Cali C/laahi Cosoble uu dalbaday muddo dheeraad ah.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble ayaa toddobaadkii hore magaalada Muqdisho isugu yeeray madaxda baarlamaanka maamulkiisa, isagoo ka dhaadhiciyay inaan la dhisi karin gole wasiiro inta laga dhisaayo dowladda cusub ee Soomaaliya, sidaas darteedna muddo 2 bilood ah la siiyo, taasoo la isku waafaqay.
Kulan ay maanta magaalada Jowhar ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeele ayaa waxay ku ogolaadeen in muddo labo bilood ah loogu darro madaxweyne Cali C/laahi Cosoble, si uu u soo dhiso golihiisa wasiirada cusub.
Si kastaba ha ahaatee, waa markii labaad oo muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble, waxaana la filayaa inay waqti kale qaadato maadaama dhismaha golaha wasiirada Hirshabeele uu ku xiran yahay doorashada Soomaaliya.